All | tournament Categories | KhelkudNews.com
हरि शिर्ष स्थानमा कायमै0ON: November 5, 2014
हरि पुन डा. योगेन तुलाचन स्मृति खुला रनिङ शिल्ड धनुषवाण प्रतियोगिताकमा ५ अंक सहित शिर्ष स्थानमा कायमै छन् । बालाजुको बिनायक बस्ती स्थित थकाली समाजमा संचालित तेश्रो दिनको खेलमा हरि अंक जोड्न असफल रहे । उनलाई दोश्रो दिनकोे अन्तिम डोरमा… Read More »
योगेन स्मृति खुला धनुषवाण जारी0ON: November 4, 2014
हरि पुन डा. योगेन तुलाचन स्मृति खुला रनिध्र शिल्ड धनुषवाण प्रतियोगिताकमा ४ अंक सहित शिर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् । बालाजुको बिनायकबस्ती स्थित थकाली समाजमा संचालित दोश्रो दिनको खेलमा हरिले मंगलवारनै ४अंक जोडेका हुन । सयुत्त रुपमा दोश्रो स्थानमा रहेका वाङगेल… Read More »
शक्ति सहित ४ खेलाडी सम्मानित0ON: November 3, 2014
शक्ति सहित ४ खेलाडी सम्मानित नेपाल जापन सम्पर्क समिति( थकाली सेवा समिति)को आयोजनामा संचालन भएको डा. योगेन तुलाचन स्मृति खुला रनिध्र शिल्ड धनुषवाण प्रतियोगिताको दोश्रो संस्करण सोमवार देखि बालाजुको बिनायक बस्तीमा शुरु भएको छ । पहिलो दिन भएको व्यक्तिगत स्पर्धामा… Read More »